Dhawunirodha kubva kumagirazi anomhanyisa pane Arch Linux ine Reflector | Kubva kuLinux
Dhawunirodha kubva kumagirazi anomhanyisa pane Arch Linux ine Reflector
Manuel de la Fuente | | Applications
Kana kurodha pasi mapakeji kubva kumatura ekugovera kwedu GNU / LinuxIzvo zvakakosha kumisikidza magirazi anomhanyisa kuitira kuti kurodha kuitike munguva ipfupi inogoneka. Kazhinji zvinokurudzirwa kusarudza magirazi ari padyo nenzvimbo yedu nekuda kwechikonzero ichi, kunyangwe mukuita izvi izvi hazviwanzo zvakanyanya kukodzera, nekuti kumhanya kwekupindura kweseva imwechete kunogarwa girazi kune simba rakawanda.
Munyaya ye Arch Linux, papeji ye Mamiriro eGirazi ivo vanogadzira vakatumira tafura ine zvese zvinozivikanwa magirazi uye izvo zvinongo gadziridzwa zvichiratidza chimiro chavo uye kumhanya kwemhinduro. Kana isu taida, isu taigona kutora avo vatinoda kubva ipapo tovanyora nemaoko mune yedu girazi rondedzero, kunyangwe kutibatsira kuti basa iri rive nyore pane Reflector.
Reflector chinyorwa chiri kutarisira kubvunza iyo data yakapihwa neMirror Mamiriro uye inotibvumidza kuti tishande navo nenzira dzakasiyana tichishandisa mirairo muoni. Iye zvino tava kuzoona mashandisiro atingaite kuti zvigadzirise magirazi anomhanya kwazvo usati wagadziridzwa wega wega.
Ngatitangei nekuisa iyo package Reflector kubva kunzvimbo dzekuchengetedza:
Kuti tione zvese zviripo zvatinogona kutarisa bhuku rayo rekubatsira:
Chishandiso chekutanga chingave ichi:
-Sort: Anotaura Reflector ndeipi paramende yaunofanira kushandisa kuronga magirazi. Sarudzo dziripo ndedze mutengo (kurodha pasi kumhanya), chibozwa (mamaki muMirror Mamiriro), nyika (nyika yenzvimbo), zera (zera rekupedzisira sync) uye kunonoka (kunonoka nguva). Mune ino kesi isu tiri kukuudza iwe kuti uvarayire zvinoenderana neyako diki kurodha kumhanya.
-l: Inogumira iyo nhamba yemhedzisiro kuhuwandu hwemirazi iyo yatinoratidza, tichifunga nezve zuva rekufananidza kwekupedzisira. Pano tinokuudza iwe kuti utipe isu nemashanu apfuura magirazi.
-Save: Inoisa iyo faira kwarinopurinda iwo mashanu ekukurumidza uye mazhinji apfuura magirazi aakawana. Iyo faira kwatinoda ivo zviri pachena yedu yegirazi. Izvo zvakakosha kuti uite backup yeiyo yekutanga giristlist kutanga.. Panguva yekumisikidza, Arch Linux inogadzira imwe otomatiki mu /etc/pacman.d/mirrorlist.original, asi hazvikuvadze kuve nechokwadi kuti iripo kana kugadzira imwe kana isipo.
Nenzira iyi, kurodha pasi kubva kumagirazi akanakisa zvingave zvakakwana kuita backup yemagirazi edu ekutanga uye tobva tadaidza Reflector nemurairo watotaurwa. Nekudaro, zviri pachena iri rakareba kwazvo rairo iro rinogona kunge rakaoma kurangarira kana usimbe kunyora. Imwe nzira yakanaka yaizove gadzira alias kuikumbira nemirairo yakapusa.
Mune yakajairwa kumisikidza ne Bash Isu tinongofanirwa kuvhura iyo ~ / .bashrc faira ine chinyorwa chemavara uye nekuisa kumagumo tambo yakaita seiyi:
Uye neizvozvo isu tave kugona kuita mirairo yatinoda nemutsika wekuraira. Semuenzaniso, ye Reflector ini ndinoshandisa izvi:
Kutenda kune iyo alias, apo ini ndoda kuvandudza iyo system zvese zvandinofanira kuita kuteedzera update mune terminal, inoita Reflector purinda magirazi mashanu anomhanya kwazvo uye achangobvumiranwa munguva pfupi yadarika ku mirrorlist, wobva wamhanya Yaourt kuita yekuvandudza izere iwo ese mapakeji eiyo epamutemo marekodhi uye ayo e AUR uye kukura.
Zvino zviri kumunhu wega wega kugadzirisa ma alias zvinoenderana nezvavanoda. Pamwe ivo vanoda kushandisa imwe seni kana vanosarudza kugadzira imwe chete Reflector, kana kutsiva Yaourt kubudikidza Packer kana kungoita Pacman. Mikana yacho haiperi.
Mukuvhara, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kushandisa Reflector Pamberi pekugadziriswa kwega kwega, zvinotora nguva yakati rebei kupfuura zvakajairwa kuti ubvunze Mirror Mamiriro, kunyangwe ichizobhadharwa nemhanyisa yepamusoro iyo ichapa kana uchirodha pasi mapakeji
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Dhawunirodha kubva kumagirazi anomhanyisa pane Arch Linux ine Reflector
Ndanga ndine matambudziko nemagirazi kwemwedzi yakati wandei. Kunyangwe ndichishandisa reflector, yega yega kana maviri mavhiki, ini ndinowana kukanganisa navo kana ndichigadzirisa; sekunge vaive vadonha uye izvo zvinowanzo shandiswa neveEuropean (pamberi pevaBrazil vasati vashandisa). Saka ndinofanira kuramba ndichichinja.
Kana ndiine nguva ndinozvipira kuti nditsvage kuti dambudziko nderei.
Nzvimbo yakanaka, kwaziso.
Chinhu chimwe chete ichi chakaitika kwandiri, ndokusaka ndakaita kuti ma alias afonere Reflector pamberi pega gadziriso, nekuti neimwe nzira, kana girazi rakandishandira zvakanaka mune yekuvandudza, kune inotevera zvaigona kuti rakanga risingachapindure.
Iwe Buntu akadaro
Ini ndasangana nematambudziko nekurodha pasi kwete muUbuntu chete, asi nekuisirwa kweArch, Debian, Suse ... uko, nekukasira, kumhanyisa kurodha, kunyanya emafaira akakura senge kernel, libreoffice kana linux firmware, inodonha pazasi pe640 Kb / sa 22 Kb / s, uye zvinotora narini, asi… pane bhagi, Mwari vakukomborere, izvo zvinondibvumidza kuti ndikurumidze kurodha pasi:
Kana kusawirirana uku kukaitika, izvo zvandinowanzoita kuvhura browser reFirefox, uye kurodha pasi kunokwira kusvika ku1200 Kb / s kwemaminitsi gumi uye wotanga kudzika zvakare, saka ndinoramba ndichivhura nekuvhara, kana kuvhura nekuvhara mapeji, zvakadii Iyo inotora nguva yakareba kuti itakure, iyo yakareba iko kukurudzira kuchave kusvikira iyo kurodha pasi faira kwapera.
Icho chokwadi chekuti inokwira kusvika ku1200 kb / s ini ndinofunga imhaka yes adsl kontrakiti inosvika gumi Mb asi kunyangwe kazhinji inosvika mashanu chete, kana zvachose.
Ndinovimba munhu abatsira, ah! Uye inogona zvakare kushandiswa panguva yekumisikidza, nezuro husiku ndanga ndichiisa Chromixium muVirtualBox kuti ndiedze uye wozoiisa palaptop yemumwe munhu anoda kutama kubva kuGüindous, kunyangwe pakupedzisira ndakaisa Antix, uye kuvhura Chrome kwakakurumidza kumhanyisa nguva yekurodha.
Pindura Iwe Buntu
Ini ndinotaura sedudziro yekuti Bridge Linux -yakadzika paArch- inosanganisa Reflector nekumisikidza, saka maitiro acho aingove ekushandisa "sudo pacman -Syyu" uye Reflector yakashanda zvoga.
Iwe unoitika here kuti uzive kuti ndeapi paramita iyo Reflector yeiyo distro inoshandisa?
Iyi inotevera peta chikamu cheBridge Linux post-yekuisa script: http://paste.desdelinux.net/5059
Mamwe ruzivo pano:
Ndiri kuona, vakaigadzira kuti vatore magirazi akawiriraniswa mumaawa gumi apfuura uye voshandisa paramende -f panzvimbo pe –Sort mwero kunyora magirazi mashanu anomhanya kwazvo. Ichokwadi ndechekuti ini handisati ndambonzwisisa kuti nei Reflector iine idzo dzesarudzo idiki; pamwe nezvayakaitawo -Sort nyika y –Nyika. Unenge uri mubvunzo wekutsvaga kuti ndezvipi zvakanaka zvine mumwe pamusoro peimwe. Ndatenda nekuisa. 🙂
Nikita A akadaro
Iwe unogona zvakare kuyedza https://aur.archlinux.org/packages/?O=0&SeB=nd&K=rate+arch+mirrors+&outdated=&SB=n&SO=a&PP=50&do_Search=Go
Pindura Nikita A.
Kupinda kunoshamisa. Kutenda nezano, ini ndakanga ndisati ndatoziva kuti ndeapi ma aliases aigona kushanda mune izvi. Ndiri kuzoishandisa pamakomputa angu maviri neArch.
Imwe drawback ndeyekuti magirazi anomhanya kwazvo haagare achienderana nemapakeji azvino.
Pane dzinoverengeka nguva ndakaongorora kuti iyo Arch imba peji inoratidza iyo X pasuru yekuvandudza asi kwete kunyangwe -Syyu inoita yakadaro yekumisikidza kuoneka. Ndosaka ndichifarira "-sort score" pane "–sort rate".
Tinogona zvakare kushandisa script kubva aur tinogona kuitora "armrr-git"
Mhoro, mushure mekuita izvi, yaourt inondikanda iko kukanganisa kunotevera:
Kanganiso yeAUR: Mibvunzo isiriyo yemibvunzo
kukanganisa: dhatabhesi harina kuwanikwa: aur
Ini ndashandura iyo bashrc ndichiisiya seye sosi, ndakaburitsa reflector, ndaisa sosi yegirazi uye ndadzosera yaourt, asi haina kuwana aur database, mune pacman.conf kana archlinuxfr repo iripo, asi handizive kwekukanda.
Batanidza mafaera kumameseji kubva kuGoogle Drive muGmail
Ratidzira Boot Manager weWindows 8 neEFI